Governora Rasoamaromaka Hery: « Tsy misy kaominina hadino izany intsony… » | NewsMada
Governora Rasoamaromaka Hery: « Tsy misy kaominina hadino izany intsony… »
Nitanisa ny zava-bita sy nampiseho ireo fitaovana eo an-tanana ho fampandrosoana ny faritra Analamanga ny governora, Rasoamaromaka Hery, omaly teny amin’ny CCI Ivato. “Tsy misy ben’ny Tanàna na kaominina hadino izany intsony. Io tsy anavahana na loko politika… Avelao any ny fizarazarana fa aleo hijery miaraka ny fampandrosoana isika”, hoy izy. Notsiahiviny fa nahavita lalana pavé 14km sy lalan-tany 82 km ny faritra, ny taona lasa. Eo koa ny tohodrano, manondraka velaran-tany 150 ha sy tsena manara-penitra miisa roa ary efitrano fianarana miisa 12 …
Momba ny fanamboaran-dalana sy ny fampitaovana izany kosa, nahazo “Engins” miisa telo : “niveleuses” roa sy “compacteur” ny eto Analamanga. Manampy ireo ny fiara miisa enina hiasana sy hanaraha-maso ny asa eny ifotony. “Volan’ny faritra madiodio, mitovy tamin’ny vola niditra tamin’ireo mpitantana teo aloha ihany izany nefa nahavidy fitaovana maro sy nahavita fotodrafitrasa tahaka izany isika”, hoy izy.
Nanteriny fa tanterahina sy atao ny asa rehefa eo amin’ny fitondrana. Sarotra ny mbola hiverenana hitondra, indrindra ho an’ny olom-boatendry, araka ny nambarany.
Esorina rehefa tsy mahavita azy
Notsiahiviny ny kabarin’ny filoha Rajoelina Andry fa ho taonan’ny asa ny 2021. “Inoana fa mahavita azy avokoa ireo minisitra notendreny, saingy tsara ny hanesorana ireo mpiara miasa aminareo rehefa tsy mahavita azy. Ny fampandrosoana an’i Madagasikara tsy tokony hiandry sady tsy azo ampiandrasana ireo tsy afaka”, hoy ihany izy.